Wasiirka Amniga Jubaland oo maanta maxkamad la soo taagay | Somsoon
Home WARAR Wasiirka Amniga Jubaland oo maanta maxkamad la soo taagay
Wasiirka Amniga Jubaland oo maanta maxkamad la soo taagay
Wasiirka amniga ee maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa maanta lasoo taagay maxkamadda Gobolka Banaadir kadib muddo bil ka badan oo uu Muqdisho ku xirnaa.
Garsooreyaasha maxkamadda Gobolka banaadir ayaa dhageystay eedo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo loo jeediyay Cabdirashiid Janan. Eedaha waxaa ka mid ah in uu geystay dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Sidoo kale waxaa maxkamadda lasoo taagay Buule Aadan Maxamed oo ah taliiyihii Ciidanka Balad Xaawo iyo Dooloow ee Gobolka Gedo. Sarkaalkaan ayaa isagana lagu eedeeyay xadgudub loo geystay dad rayid ah oo ay ka ka mid yihiin xarig iyo jirdil.
Ciiidanka Booliiska Soomaaliya ayaa 31-kii August magaaladda Muqdisho ku xiray Cabdirashiid Janan waxaana lagu soo eedeeyay dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Hey’adda udooda quuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sidoo kale Cabdirashiid Janan ku eedeysay in uu Gobolka Gedo ka geystay tacadiyo ka ka dhan ah xeerka banii aadannimada.
Dad badan ayaa is weydiinaya sababta sarkaallka military loo geyn waayay maxkamadd Ciidanka ee loo geeyay maxkamad rayid ah balse waxaa laga dhur sugayaa go’aanka ay maxkamaddu ka gaarto dambiyadda loo heysto Cabdirashiid Janan iyo Buule Aadan.
Article horeInter vs Juventus, kulanka caawa ee Derby d’Italia
Article socoda Somalia: Opposition party files case against FG. at the Supreme Court